Home Wararka Labo kamida kuraastii boobka oo maanta markale laga soo saarayo Dhusamareeb
Labo kamida kuraastii boobka oo maanta markale laga soo saarayo Dhusamareeb
Iyada oo ay socoto boobka kuraasta ayaa labo kamida kuraastii boobka oo maanta markale la doonayaa in laga soo saarayo Dhusamareeb Guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa shaaciyay in maalinta berri ay qaban doonaan doorashada labo kursi oo ay ku tartami doonaan musharaxiiinta doorashada Xildhibaanada golaha shacaboobka. Labada kursi ayaa kala ah Hop043 iyo Hop067 oo ah kursi uu muran badan ku gadaaman yahay.
Natiijada kuraastan ayaa ah kuwa la sii og yahay sida doorashadii maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb oo la sii saadaaliyay. Labada Kursi mid ka mid ah waxaa hadda doonaya in uu qaato taliyaha KMG ah ee NISA oo maalmihii la soo dhaafay uu ka taagnaa buuq xooggan oo ka dhashay habka loo maamulay kursigaasi.
Kursiga labaad ayaa lagu waddaa in uu ku guuleysto Xuseen Iidow kaasoo ku fadhiyay afartii Sano ee lasoo dhaafay.